लोकवार्ता परिषद्द नेपाल को आयोजनामा उपन्यासकार - Khabarsabaiko
लोकवार्ता परिषद्द नेपाल को आयोजनामा उपन्यासकार
हुम्ला-लाेकवार्ता परिषद्द नेपाल को आयोजनामा उपन्यासकार नीलम कार्की निहारिकाद्वारा लिखित पछिल्लो उपन्यास ‘द्रौपदी अवशेष’ माथि काठमाडौँमा विमर्श गरिएको छ ।
कार्यक्रमका वक्ता प्रतिनिधिसभा सांसद छक्कबहादुर लामाले उपन्यासले हुम्लाको यथार्थपरक र गम्भीर विषय उठान गरेको बताए । पौराणिककालीन
पात्र द्रौपदीसँग जोडिएको सामाजिक परम्परा हुम्लामा अझै पनि कायम रहेको बताउँदै उपन्यासमा परिवेश, विषयवस्तु र घटनाक्रम यथार्थपरक भएको उनले बताए । फरक परिवेशमा हुर्केकी लेखकले जिबन्त रुपमा बहुपति प्रथालाई प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रसंशा गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्का वक्ता प्रा.डा. वीणा पौड्यालले उपन्यासले कला, संस्कृति, पर्यटन, धर्म आदि बहुविषय पनि उठान गरेको उनको भनाई थियो ।
बहुपति प्रथा नै उपन्यासको मुख्य विषयवस्तु भएको उनले बताइन् । सामाजिक कुरीतिको रुपमा अन्य समाजले मानेको विषयलाई बाहिर ल्याउनु कठिन कार्य भएको बताउँदै उनले त्यो चुनौति लिन उपन्यासकार तयार भएकोमा गर्व लागेको बताइन् ।
उपन्यासमा महिलाको विषय उठान गर्न महिला लेखक भएकोले नै अझ सशक्त भएको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रा.डा. सावित्री मल्ल कक्षपतिले पछिल्लो समय अनुसन्धानमूलक कृतिका लेखक र पाठकको संख्यामा वृद्धि भएको बताइन् ।
आध्ययन अनुसन्धानमा आधारित चिरहरण र योगमाया जस्तो सफल उपन्यास सिर्जना गरेर आफ्नो कलम स्थापित गरि सकेकी कार्कीको यो उपन्यास नेपाल बाग्मयको लागि नै अर्को एक महत्वपूर्ण प्राप्ति भएको उल्लेख गरिन ।उपन्यास पढ्दा त्यही भूगोल र परिवेश र भिन्न सस्कृतिमा पाठकलाई पुर्याउने र सँगसँगै घुमाउने पनि उनले बताइन् । उपन्यासमा यथार्थता र विविधता भएको भन्दै उपन्यास पढ्दा बागलुङमा गएर टिमुर हालेको, जिम्बुले झानेको थकाली खाना खाएजस्तो चखिलो भएको उनको भनाई थियो ।
यो उपन्यासमा चलचित्र बन्नसक्ने बलियो सम्भावना भएको उनले बताइन् । तर चलचित्र बनाउन हतार नगर्न पनि उनले उपन्यासकार कार्कीलाई आग्रह गरिन् । बीपी कोइरालाको ‘तीनघुम्ती’ उपन्यास चलचित्र बनाउँदा बिग्रिएको, ‘परिबन्ध’ कथा चलचित्र बनाउँदा बिग्रिएको भन्दै यो उपन्यासलाई चलचित्र बनाउन अघि गम्भीर बन्न उपन्यासकारलाई उनले आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता डा. धनप्रसाद सुवेदीले आञ्चलिक उपन्यास मध्ये यो पनि एक शसक्त उपन्यास भएको बताए । शंकर कोइरालाको खैरेनीघाटदेखि अहिले नीलम कार्की निहारिकाको ‘द्रौपदी अवशेष’ एक भिन्न पहिचान भएका आञ्चलिक उपन्यास भएको उनले बताए ।
हिमालका परिवेशमा यस अघि केहि उपन्यास प्रकाशित भएका भए पनि यो उच्च हिमाली क्षेत्र को फरक कथा भएको बताए ।
विद्यमान बहुपति परम्परालाई आधार बनाएर सफल उपन्यास लेखन भएको उनको भनाई थियो । बहुपति परम्परा ठीक वा बेठीक भन्नु भन्दा पनि उपन्यासकारले चलाखीपूर्ण तरिकाले यसको यथार्थता र सीमा देखाउने काम गरेको उनले बताए ।
उपन्यासमा प्रेम, जीवन र स्वतन्त्रताजस्ता विषयलाई बढो रोमाञ्चक ढंगले व्याख्या गरिएको उनले उल्लेख गरे । प्राय भिन्न सस्कृतिमा पुस्रक लेखिदा बिबाद हुने गरेकोमा ,द्रोपदी अवशेषलाई बिबाद मुक्त बनाएर सम्पूर्ण यथार्थ चित्रण गर्नु लेखकको कलमको ठुलो खुबी भएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै उपन्यासकार नीलम कार्की निहारिकाले रचनागर्भ, विषयवस्तुको छनौट, लेखन र विमर्शसम्मका विषयमा आफ्नो भनाई राखेकी थिइन् । लेखकले जुन सोचका साथ लेख्छ पाठकले त्यही रुपमा बुझिदिँदा भने लेखन सफल भएको महसुस हुने उनले बताइन् ।
पाठक र समालोचकको सकारात्मक प्रतिक्रियाबाट आफू अत्यन्तै उत्साहित रहेको बताउँदै उनले विषयवस्तु छनौटप्रति गर्व लागेको बताइन् । बहुपति प्रथाको उठान गम्भीर भएकोले पनि गलत र सही भन्नु भन्दा पनि सामाजिक सास्कृतिक यथार्थ बाहिर ल्याउने प्रयास गरेको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रमका सभापति तथा लोकवार्ता परिषद् नेपालका अध्यक्ष प्रा.डा. प्रेमकुमार खत्रीले धेरै पहिले आफूले पनि यस्तै विषयलाई पुस्तकको रुपमा बाहिर ल्याउन प्रयास गरे पनि डर र धम्कीका कारण थन्किएको भन्दै आख्यानको माध्यमबाट सो विषय बाहिर आएकोमा खुसी लागेको बताए । उपन्यासकार कार्कीले अनुसन्धानमूलक कृति प्रकाशन गरेको र त्यसमा पनि संस्कृतिलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएकोमा धन्यवाद दिएका थिए ।
कार्यक्रममा जुम मार्फत अमेरिकाबाट जोडिएका ईश्वर देवकोटाले पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखेका थिए । सीमित सहभागीहरुको बीचमा भएको कार्यक्रमलाई लोकवार्ता परिषद् नेपालका महासचिव डा. भक्त राईले सहजिकरण गरेका थिए ।